काेराेनाबारे ५ भ्रम र वास्तविकता
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमण फैलँदै गर्दा विश्वका मानिस जति त्रसित बन्न पुगेका छन् त्यति नै यसबारेको गलत सूचनाले मानिसलाई भ्रामितसमेत पारेको छ ।
ती भ्रमबारेको सत्यता के हो त ? बुझ्न जरुरी छ ।
‘भिटामिन सी’ले कुनै फाइदा गरिरहेको छ भने त्यो धेरै अहोभाग्यको कुरा हुनेछ, नत्र भिटामिनका डिब्बा रित्याउनु मात्रै हो,’ डा. सेनफरले भने ।
‘उच्च मात्रामा भिटामिन सीको प्रयोगले पेट र मिर्गाैलामा हानि गर्न सक्छ,’ ओहियोको क्लिभल्यान्ड बाल अस्पतालका बाल संक्रामक रोगविशेषज्ञ डा. फ्रान्क एस्पेरले भने ।
अहिले विश्वभर मास्कको अभाव बढेको छ । तर, के सडकमा हिँडिरहेको मान्छे अर्कोलाई संक्रमण नहोस् भनेर मास्क प्रयोग गरिरहेका छन् ? छैनन् ।
धेरैजसो स्वस्थ र लक्षण नै नदेखिएका मानिसले मास्क प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, खासमा मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने लक्षण देखिएका र संक्रमितले हो । उनीहरूका लागि मास्कको अभाव छ ।